Akhriso: Hindise Sahrciyeedka Kheyraadka Biyaha ee Golaha Shacabka Horyaalla
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa September 23-keedii waxaa ay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hor-keentay hindise sharciyeedyo 15 ah uu ku jiro “Hindise Sharciyeedka Kheyraadka Badda”. Waxaana waqti-xaadirkan uu ku jiraa aqris, waxaa la filayaa in ay ka doodaan dhowaan. Hadaba Goobjoog Business waxaa ay halkan idin kugu soo gudbineysaa nuxurka iyo qodobada ugu muhiimsan ee Hindise Sharciyeedka Maaliyadda.
Qodobka 3aad: Lahaanshaha Biyaha
Faqrada 1aad. Dhammaan biyaha qulqula dusha sare ee dhulka iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira, xataa haddii aan dhulka hoostiisa laga soo saarin, waa hanti guud, waxaana loo tixgelinayaa kheyraad dabiici ah oo Qaran, waxaana loo dhowri doonaa, loona isticmaali dooonaa si siman ama wadajir ah.
Faqrada 2aad. Dawladda Federaalka ah waxey si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta dalka, uga hawlgeli doontaa siyaasadda iyo sharci dejinta kheyraadka biyaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qodobka 4aad: Biyaha Diirran (thermal water) iyo Biyaha Mineralka ah
Faqrada 1aad. Isticmaalka biyaha diiran iyo soo saaarista kuwa mineralka ah waxaa loo sameyn doonaa sharci gaar u ah.
Faqrada 2aad. Ka hor inta aan la sameyn sharciga ku tilmaaman Faqrada 1aad, Wasiirku waxuu soo saarayaa dikreeto Wasiir oo uu ku faahfaainayo heerarka tayada ee looga baahanyahay in ay lahaadaan biyaha ay ku qorantahay “Mineral”.
Qodobka 5aad: Xuquuqda Isticmaalka Biyaha
Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu helo biyo uu isticmaalo, si waafaqsan qawaaniinta sharcigan.
Qodobka 6aad: Isticmaalka Biyaha ee Baahida Qoysaska
Isticmaalka biyaha qoysku isticmaalo ee ku saabsan caddadka dabooli kara baahida shakhsiga, qoysaska iyo adeegga guriga, oo ay ku jiraan waraabinta xayawaanka guri-joogta ah iyo waraabinta beer-guriyeedka (jardiinka) uma baahna rukhsad.
Qodobka 7aad: Dhismaha Hay’adda kheyraadka Biyaha Qaranka
1. Waxaa la dhisi doonaa Hay’adda kheyraadka Biyaha Qaranka.
2. Hay’adda waxey masuul ka tahay qorsheynta, maareynta, isticmaalka iyo ilaalinta kheyraadka biyaha, waxaana sharcigu siinayaa awoodaha ay u baahan tahay si ay u fuliso waajibaadkeeda ku tilmaaman sharcigan.
3. Hay’addu waxey lahaanaysaa awoodaha iyo waajibaadka soo socda:
b) Waxey cayimeysaa, xadeyneysaa oo ay khariidad u sameyneysaa biyo-rogga webiga iyo biyo dhuleedka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya;
t) Waxey cayimeysaa qoondeynta iyo habka isticmaalka kheyraadka biyaha si ay ugu kala qeybiso istcimaalka kala duwan ee biyaha iyo biyo-isticmaalayaalka kala duwan;
j) Waxey diyaarineysaa tilmaamaha iyo heerarka, ayadoo la tashaneysa hay’adaha kale ee ay khuseyso, sida looga hortagayo wasakheynta kheyraadka biyaha, sida loo badbaadinayo tayada biyaha iyo bey’ada biyo ku noolka;
x) Waxey bixineysaa awaamirta la xiriira xafidaada dhismo-biyoodyada si looga hortago khasaare ay u geysan karaan dadka, hantida iyo dalag-beereedka.
kh) Iyada oo la tashaneysa hay’adaha dowaladda ee ku leh, waxey soo saareysaa tilmaamo guud oo ku saabsan marin-biyoodyada, si ay sahal u noqoto in la helo akhbaar dhameystiran marka la tixgelinayo codsi Rukhsad wasakh ama haraa ku daadin kheyraad biyood.
d) Waxey amraysaa in la saxo ama la joojiyo shaqooyin dhismo-biyood aan waafaqsaneyn siyaasadda kheyraadka biyaha ee Soomaaliya, ama aan waafaqsaneyn daraasaadka u gaarka ah biyo rogga webiga ama biyo-duleedka shaqooyinkaasi khuseeyaan, ama aan waafaqsaneyn mabaadi’da guud ee sharciga biyaha, waxeyna hubeynsaa hirgelinta amarkaas.
s) Waxey xiriirineysaa kormeerka biyo-duleedka iyo biyo dhuleedka, iyadoo ururineysa macluumaadka iyo akhbaarta biyo; iyo
Sh) Waxey bixineysaa amarka dhimista isticmaalka biyaha markii ay jiraan xaalad biyo yaraan ama xaalado kale oo degdeg ah, waxeyna kor ka ilaalineysaa fulinta amarkaas.
4. Hay’addu waxey magacaabeysaa Baare xaqiijiya in biyaha la cabbo dhawrsoon yihiin, nadiifna yihiin.
5. Haddii ay noqoto lagama-maarmaan, Hay’addu waxey u wakiilan kartaa qeybo kamid ah awoodaheeda iyo waajibaadkeeda hay’ad kale si ay u filiso xilkaas
Qododka 8aad: Xubnaha Hay’adda Kheyraadka Biyaha Qaranka
Hay’adda Kheyraadka biyaha Qaranku waxey ka koobantahay labaatan iyo sadex (23) xubnood, oo shan (5) ka mid ah uu soo magacaabayo Wasiirka mas’uuulka ka ah kheyraadka biyaha; sideed iyo toban (18) waxaa laga soo magacaabayaa Dawlad-goboleedyada xubinta ka ah Dawladda Federaalka ee Soomaaliya.
Qodobka 9aad: Mas’uuliyadda iyo Waajibaadka Wasaaradda
Wasaaradda u xilsaaran kheyraadka biyaha leedahay xilka iyo waajibaadka soo socda:
b) waxey dajineysaa siyaasadda guud ee biyaha Qaranka;
t) Waxay kor u qaadeysaa horumarinta kheyraadka biyaha;
j) Waxey sameyneysaa daraasaad iyo biyo-dhuleedka ee waddanka; kheyraadka biyo -duleedka iyo biyo dhuleedka ee wadanka;
x) Waxey horseedeysaa daraasaad iyo wada-hadallo heshiisyo la xiriira isticmaalka biyaha xadka dhaca iyo kuwa xadka ka gudba; iyo
kh) Waxaa kale oo ay Wasaaraddu leedahay wixii kale oo masuuliyad iyo Waajibaad ah oo kaga aadan Dastuurka iyo shuruucda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qodobka 16aad: Awoodda Hay’adda Waqtiga Abaaraha
1. Haddii ay dhacdo in isbadalka cimiladu keeno, biyo yari ku timaadda meelaha biyaha laga helo mid kamida, oo aan qancineyn dhammaan dadka Rukhsada u haysta isticmaalka biyaha baahidooda, Hay’addu waxay si isla’eg u yareyn doontaaa, kadib ogeysiis ay gaarsiisay Rukhsadleyda arrintaasi ay khuseyso, mugga biyaha ee ay Rukhsadda u haystaan.
2. qoysaska iyo waraabka xoolaha lagama yareyn doono mugga biyaha ay u isticmaalaan baahidooda, marka laga reebo xaalad abaareed aad u culus oo ay Dawladdu bayaan kasoo saartay.
Qodobka 18aad: Shahaadooyinka Kartida Xirfadaha
Qofna ma fulin karo, ha ahaaoto fulin hawl ama hawl kale, sida dhismo biyood, ceel-qodis iyo biyo sifeyn, haddii uusan haysan shahaado karti xirfadeed oo ay bixisay Hay’adda.
Qodobka 20aad: Khidmadda Biyah
Faqrada 2aad, Qiimaha Khidmadda biyaha waxaa jaangoynaya Wasiirka, isagoo la tashanaya Wasiiradda Maaliyadda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada, waxaana si hufan loogu tilmaamayaa xeer-nidaamiye ay Wasaaraddu soo saareysa.
Qodobka 36aad: Mas’uuliyadda Fulinta Sharcigan
Ka hor inta aan la ansixin Hay’adda, Wasaaradda ayaa sii wadeysa mas’uuliyadda iyo waajibaadka ay leedahay Hay’adda Kheyraadka Biyaha Qaranka.